Ukuhlaziywa kwesikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3, ngaphezu kwewashi le-alamu | Izindaba zamagajethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Izipikha, Izibuyekezo
Namuhla siza nokuhlaziywa kwe igajethi engajwayelekile kunokujwayelekile. Isesekeli esinakho sonke, futhi esizondile, iwashi le-alamu. I-Energy Sistem iveza okungaba ukuvela kwewashi le-alamu, i- isikhulumi sewashi 3. Iwashi le-alamu ozoba nalo uthando oluthe xaxa lapho uvuka njalo ekuseni.
Isipikha sewashi le-Energy Sistem 3 sifika que ukuvuka akusona isikhathi esibi kakhulu sosuku. Ngenxa yesipikha sayo, kanye nezibani zayo, zingenza indlela yethu yokuvuka njalo ekuseni kumnandi kakhulu futhi kuyabekezeleleka. Ngabe ufuna ukubona konke lokhu okusinikeza khona kule nsiza? Hlala ufunda
1 Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 sikuvusa ngokuhlukile
2 Ukwakhiwa kwesikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3
3 Ngabe isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 sinikezani?
4 Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 ishidi lobuchwepheshe
5 Izinzuzo nezingozi zesipikha sewashi le-Energy Sistem 3
Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 sikuvusa ngokuhlukile
Kukangaki sicabanga ngokushaya iwashi lethu le-alamu odongeni noma phansi, akunjalo? Ukuphazanyiswa kwethu ukulala ekuseni kuyinto cishe yonke into yabantu abayizondayo. Yize ngeshwa izibopho zethu zingasishiyi enye indlela. Energy Sistem futhi isipikha esisha sewashi 3 sizozama ukwenza lowo mzuzu ube lula.
Iwashi le-alamu yakudala okuthi kuze kube yiminyaka embalwa edlule kube sezimweni eziningi ithathelwe indawo yi-smartphone. Igajethi yethu yansuku zonke iyakwazi nokusivusa njalo ekuseni, futhi isinike nesikhathi. Kwalokhu amawashi e-alamu akhona, ngokuya, usengozini enkulu. Futhi ezikhathini eziningi kuyinto yokuhlobisa ngaphezu kwanoma yini enye. Uma ufuna ukuvuka unomoya ongcono, lapha ungathenga isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 ku-Amazon.
Energy Sistem, ene ukuvela kwewashi le-alamu, inika le nsiza ithuba lesibili. Isipikha xhuma i-smartphone yethu ukulalela umculo wethu intandokazi, nge amalambu ashintsha umbala futhi lokho isivusa ngendlela ethambile njalo ekuseni. Lokhu kuzwakala kungcono kakhulu kithi kunaleyo “beeep… beeep !!” embi, akunjalo?
Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 naso unomsakazo we-FM, ngaphandle kokungabaza i-plus eyenza kube isesekeli esisebenza ngezinto eziningi. A enye yezinketho ezimbalwa esingazithola emakethe ukulalela umsakazo ngaphandle kwesidingo sokuxhumeka kwe-inthanethi. Ngenxa yakho I-antenna ehlanganisiwe sizokwazi ukujabulela ngokusebenzisa isipikha sayo uhlelo lwethu oluthandayo, umdlalo osemsebenzini noma izindaba zesikhashana.
Futhi, uma kunjalo isesekeli esinomklamo okhangayo, wanamuhla nokuthi singakusa noma yikuphi, kangcono kakhulu. Uxhumano i-bluetooth, umsakazo we-FM odidiyelwe, amalambu e-LED yemibala, ibhethri langaphakathi ukusebenzisa ngaphandle kwamaplagi, futhi ngentengo engabizi kakhulu kuyakukholisa?
Ukwakhiwa kwesikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3
Siyathola isikhulumi ukuthi ngaphezu kokusebenzela ukusivusa nge-alamu yakho kufanelana kahle netafula lakho lomsebenzi, igumbi lokuphumula noma ikhishi. Umculo wethu uzwakala umuhle kuye ngenxa yakhe 8 Watts wamandla noma kuphi endlini. Y isitayela sakhe asishayisani kunoma yiliphi igumbi. Umbala wayo omhlophe nokubukeka kwawo okucwebezelayo okunemigqa ebushelelezi egobile kudonsela wonke amehlo.
Ku phezulu yi isikhulumi nge-grille emhlophe, uvumelana nawo wonke umzimba wegajethi. Engxenyeni yegridi itholakala inzwa yokuthinta lapho singashintsha umbala yokukhanya nge-pulse. Noma ngokucindezela isikhathi eside singakhetha izindlela zokukhanyisa ezahlukahlukene. Phakathi kwabo ukushintsha umbala okuzenzakalelayo, noma imodi yokuvuka, ngokwesibonelo.
Ku ingxenye engaphambili sayithola isikrini esincane lapho singabona khona isikhathi kukhanya kahle ngaso sonke isikhathi. Mhlawumbe isikrini sizovela incanyana maqondana nosayizi wegajethi. Yize kude, njengokusuka embhedeni kuya etafuleni eliseceleni kombhede, ungasibona kahle isikhathi.
Kwenye yakhe eceleni sithole ifayela le- Izilawuli zemanyuwali ezinezinkinobho ezine, ngaphandle kwe Khanyisa ucishe. Ngabo singakwazi lawula ukudlala komculo, setha i-alamu noma wenze kusebenze imodi yokuyixhuma nedivayisi esiyithandayo.
Ngu uhlangothi lwangemuva lutholakala ngamachweba wokuxhuma. Sithola imbobo yokushaja kuleli cala ngefomethi I-Micro USB. Futhi imbobo ye-mini jack 3.5 ukuxhuma enye idivayisi ngaphandle kokusebenzisa i-bluetooth. Iphuzu elisekela isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 ukuthi inebhethri layo. Ngakho-ke singayisebenzisa nomaphi lapho sifuna khona ngaphandle kokuya ukufuna ipulagi.
Ngabe isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 sinikezani?
Okugqame kakhulu ngesipikha sewashi le-Energy Sistem 3 yilezi amalambu e-LED anemibala eminingi obala ngayo. Sibonga u izinhlelo ezahlukene Singakhetha umbala ofana kahle nomhlobiso wethu. Noma yenze ishintshe ngokuzenzakalela ithoni yayo, into edala umoya omnandi kakhulu wokuphumula. Iphinde ibe nalokho okuthiwa imodi yokuvuka. Usebenzisa imodi yokuvuka, sengathi kuphuma ilanga, isikhulumi sewashi 3 izokhanyisa kancane kusuka ekukhanyeni okuncane kukhanye ngokwengeziwe futhi kukhanye ngaphambi kokuba i-alamu ikhale.
Thenga isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 manje ku-Amazon ngemali engaphansi kwama-euro angama-40
Isikhulumi Isipikha sewashi le-Energy Sistem 3 enaso amandla ama-watts ayi-8. Ngokusobala akusona isikhulumi esinamandla kakhulu esesihlolile, kepha ngokwanele ukujabulela umsindo wekhwalithi yomculo wethu noma yikuphi endlini. Umsindo owukhipayo ucacile futhi kuzwakala kukuhle impela ngisho nevolumu ivuliwe. Ngenxa ye-suede yayo ehlanganisiwe, singakwazi futhi ukujabulela Umsakazo we-FM, okungeziwe ebesikuthanda ukukuthola.
Uma sibheka ukusebenza kwewashi layo le-alamu, isipikha sewashi le-Energy Sistem 3 linikeza ithuba lokuhlela ama-alamu amabili ngokuzimela. Ngenxa yakho ukuxhumeka kwe-bluetooth netheku lakho lokungena 3,5mm ujack singavuka, ngaphezu kwe-alamu yendabuko, ngomculo esiwuthanda kakhulu. Futhi ine Snuza umsebenzi, ukumisa i-alamu futhi iyaphinda ngemuva kwemizuzu emi-5. Futhi yakhe 1800 mAh ibhethri Isetshenziselwa ukuthi singayisebenzisa noma ikuphi, kodwa futhi ukuze singakhathazeki ngewashi le-alamu uma kunokucima kukagesi ebusuku.
Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 ishidi lobuchwepheshe
I-Modelo isikhulumi sewashi 3
Conectividad i-wifi - i-Bluetooth 4.2 ne-3.5 mm jack
Radio I-FM ene-antenna ehlanganisiwe
I-Iluminación I-RGB LED
Ibhetri 1800 mah
Ukuzimela Amahora we-11
Isikhathi sokushaja Amahora we-3
Isisindo 537 g
Ubukhulu 140 x 130 x 130
Intengo 39.90 €
Ukuthenga Isixhumanisi Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3
Izinzuzo nezingozi zesipikha sewashi le-Energy Sistem 3
Okungeziwe okuhle kakhulu ukuthi isipikha sewashi le-Energy Sistem 3 sinakho ibhethri lakho, okuthile okuyinika ukusetshenziswa okuningi ngaphandle kwewashi le-alamu.
La Umsakazo we-FM Nge-antenna ehlanganisiwe futhi kuyinhlanganisela ethokozisayo eyenza isipikha sewashi sithole amaphuzu ngokuqhathaniswa nezinye izinketho.
La amandla isikhulumi 8 W yenza umculo wethu noma umsakazo uzwakale kahle kunoma iyiphi ikhona lendlu.
Amandla nekhwalithi yomsindo
Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3 ayilungiselelwe ukusetshenziswa ne-Alexa noma omunye umsizi wezwi, into ekhawulela ukusebenza kwayo.
El usayizi wesikrini Kuyahlekisa, ikakhulukazi uma kubhekwa usayizi wedivayisi.
Akuhambisani nabasizi bezwi
Isikhulumi sewashi le-Energy Sistem 3
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izibuyekezo » Isipikha sewashi le-Analysis Energy Sistem 3
I-MateBook D15, ukuthwala nokuklama kokusetshenziswa kwansuku zonke [UHLAHLELO]